သက်တမ်း ၅ နှစ်ခံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးပြီ | ဧရာဝတီ
သက်တမ်း ၅ နှစ်ခံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးပြီ
သာလွန်ဇောင်းထက်| November 1, 2012 | Hits:4,813
10 | | နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်လျှောက်ထားသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် များကိုသာ သက်တမ်း ၅ နှစ် ထုတ်ပေးမည် (ဓာတ်ပုံ- ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
ကမ္ဘာတ၀န်းရှိ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံရုံးများတွင် ယနေ့နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်း တိုးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားမှုများ အတွက် သက်တမ်း ၅ နှစ်ခံ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးများတွင် နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး သက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ စတင်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်အတူ ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် နေထိုင်ကြသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံးများတွင် သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထားခြင်းများ အတွက် သက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ရရှိမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရုံးမှ ဌာနခွဲမှူး ရဲမှူး စိုးထွန်းအောင်က ပြောသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးတဲ့နေရာတိုင်းမှာ သက်တမ်း ၅ နှစ်နဲ့ ထုတ်ပေးမှာပါ။ ကမ္ဘာတ၀န်းက မြန်မာ သံရုံးတွေလည်း ပါတယ်။ လောလောဆယ် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရုံးတွေကနေ ထုတ်ပေး နေပါတယ်။ မန္တလေး နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရုံးက ဒီနှစ် ဇူလိုင် ၄ ရက်နေ့မှ စဖွင့်တာပါ” ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ရှင်းပြသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှ စတင်လျှောက်ထားသော နိုင်ငံကူးလက်မှတ် များကိုသာ သက်တမ်း ၅ နှစ်ရှိ နိုင်ငံကူး လက်မှတ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နိုဝင်ဘာ ၁ ရက် မတိုင်မီက လျှောက်ထားခဲ့သော နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များမှာ ယခင်အတိုင်း သက်တမ်း ၃ နှစ်သာ ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးရေးရုံးမှ သိရှိရသည်။
ပုံမှန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားမှုများအတွက် စုစုပေါင်း ၂၁ ရက် အချိန် ကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်မှာမူ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲ ယခင်အတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်သိမ်းက နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားရာတွင် တင်ပြရသော အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက် ပုံစံ ၁၇ နှင့် ပုံစံ ၁၉ ကို ပယ်ဖျက် ဖြေလျှော့ပေးရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး ဖြစ်သော်လည်း လတ်တလောတွင် ညွှန်ကြားချက် တစုံတရာ မရရှိသေးဟု ရဲမှူး စိုးထွန်းအောင်က ဆိုသည်။
“ကျနော်တို့ဆီတော့ ဘာညွှန်ကြားချက်မှ မရောက်သေးပါဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သက်တမ်း ၅ နှစ် တိုးမြှင့်ပေးခြင်းအပေါ် ကြိုဆိုသော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်မှုနှင့် အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လျှော့ချပေးရန် လိုလားသည်ဟု နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လျှောက်ထားသူများက ဆိုကြသည်။
“၂၁ ရက်ကြာတာကို ထပ်ပြီးလျှော့ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုကောင်းမယ်။ နောက်ပြီး လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အဆင့်ဆင့်တွေ ထပ်လျှော့ပေးမယ် ဆိုရင် အဆင်ပြေမယ်။ အခု ပုံစံ ၁၇၊ ပုံစံ ၁၉ မလိုတော့ဘူးလို့ သတင်းထွက်ပေမယ့် အခုထက်ထိ မဖြေလျှော့သေးဘူး။
အဲဒါ မြန်မြန်ဖြစ်နိုင်ရင် ကောင်းတယ်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ အဆင့်ဆင့်လျှော့ပေးနိုင်လေ ပြည်သူက ပိုအဆင်ပြေလေ ပါပဲ။ နောက်တခုကတော့ နယ်က လူတွေ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လုပ်ဖို့ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးကိုချည်းပဲ တက်လာနေရတာ။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့ရုံးခွဲတွေ ဒီထက်ပိုပြီး ဖွင့်ပေးနိုင်ရင် နယ်က လူတွေအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေမယ်” ဟု နိုင်ငံကူးလက်မှတ် လာရောက်သက်တမ်းတိုးသူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ဧရာဝတီသို့ သုံးသပ်ပြော ဆိုသည်။
ကွန်တိန်နာထဲ လက်နက်တွေ့မှု ဒိုင်းမွန်းစတားနှင့် ပတ်သက်ခြင်းမရှိ
3 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 2, 2012 - 2:36 am	အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ပုံစံ ၁၇ တို့ ပုံစံ ၁၉ တို့ ဘာညာ ဘာညာ ထောက်ခံစာ၊ ဘာညာတွေ လျော့တာတော့ လုပ်သင့် ဖြစ်သင့်တာ ကြာပါပြီ။ ၂၁ ရက် ကြာတာကတော့ အမေရိကားလို နိုင်ငံမှာတောင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် ရှိပြီးသား သက်တမ်းတိုးတာတောင် အနည်းဆုံး ၃ ပတ်ကနေ ၆ ပတ် စောင့်ပါ (ကြာနိုင်တယ်) ပြောပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ၂ ပတ် ၃ ပတ်နဲ့ ပြန်ရချင်လဲ ရတတ်ပါတယ်။ အကြာနိုင်ဆုံးကို ပိုပိုမိုမို ပြောထားပုံ ရပါတယ်။ ၂၁ ရက်ကြာတာတော့ သည်လောက် မဆိုးဘူး ထင်ပါတယ်။ ဟိုဟာ သည်ဟာ လိုတယ်ဆိုပြီး ဘာဘာညာညာတွေ တောင်း၊ အချိန်မဆွဲဘို့ပဲ အရေးကြီးပါတယ်။
Reply	Myoe Wynn November 2, 2012 - 2:43 am	I like Irrawaddy(Burma Version).
Pls: Post fast on time true update news & events.
Reply	zawminhtut November 2, 2012 - 8:49 am	fantasic irrawaddy…
ထိုင်းရှိ မြန်မာ အလုပ်သမား ယာယီနိုင်ငံကူး လက်မှတ် သက်တမ်း ၆ လ ထပ်တိုး
ထိုင်းရောက် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ရင်ဆိုင်ရမယ့် နိုင်ငံကူး လက်မှတ်သစ်
ထိုင်း ဆန္ဒပြပွဲများကြောင့် ဗီဇာသက်တမ်းလွန် မြန်မာ အလုပ်သမားများ အခက်အခဲဖြစ်
ထိုင်းရှိ မြန်မာ အလုပ်သမား သားသမီးများ ဗီဇာရရှိရေး စီစဉ်နေ